IGalantamine Hydrobromide: Iziyobisi ezilungileyo zesifo se-Alzheimer-Phcoker
Isishwankathelo seGalantamine Hydrobromide
IGalantamine hydrobromide sisiyobisi esisetyenziselwa ukunyanga isifo sengqondo esixhalabisayo. IGalantamine ekuqaleni yayikhutshiwe kwisityalo seqhwa iGalantus spp. Isongezelelo segalantamine nangona kunjalo siselkaloid ekumgangatho ophezulu eyenziweyo ngemichiza.
Nangona unobangela wesifo se-Alzheimer engaqondakali kakuhle, kuyaziwa ukuba abantu abanesifo i-Alzheimer banamanqanaba asezantsi e-acetylcholine yemichiza kwingqondo yabo. I-Acetylcholine inxulunyaniswa nomsebenzi wokuqonda kubandakanya inkumbulo, ukufunda kunye nonxibelelwano phakathi kwabanye. Ukwehla kwale khemikhali (acetylcholine) kunxulunyaniswe nesifo sengqondo esixhalabisayo Isifo se-Alzheimer.
Izibonelelo zeGalantamine zizizigulana ezinesifo sika-Alzheimer ngenxa yendlela esebenza ngayo. Isebenza ngokwandisa amanqanaba e-acetylcholine ngeendlela ezimbini. Enye kukuthintela ukonakala kwe-acetylcholine kwaye enye kukusebenzisa ukumodareyitha kwe-nicosterinic acetylcholine receptors. Ezi nkqubo zimbini zinceda ukwandisa isixa se-enzyme, i-acetylcholine.
Ngelixa kunokunciphisa iimpawu zesifo sika-Alzheimer, i-galantamine hydrobromide ayilonyango olupheleleyo lwesifo se-Alzheimer kuba asichaphazeli oyena nobangela wesifo.
Ngaphandle kwezibonelelo zegalantamine zokunyanga iimpawu zesifo i-Alzheimer's, i-galantamine inxulunyaniswa nokuphupha okuhle. IGalantamine kunye nephupha eliluhlaza ngumbutho oxelwe ngabasebenzisi ngabanye. Ukufezekisa le galantamine kuthathwa ixesha phakathi kokulala kwakho umzekelo emva kwemizuzu engama-30 yokulala. Abanye ababoneleli ngononophelo lwempilo baya kukhuthaza i-galantamine kunye neenzuzo zokuphupha ezintle ngokusebenzisa ishedyuli esweni ukuze kuthintelwe iziphumo ebezingalindelekanga ezingeyomfuneko.
Isongezelelo seGalantamine senzeka kwiifom zethebhulethi, kwisisombululo somlomo kunye nakwicapsule eyandisiweyo. Ihlala ithathwa ngokutya kunye nokusela amanzi amaninzi ukunqanda iziphumo ebezingalindelekanga ezingafunekiyo.
Iziphumo eziqhelekileyo zegalantamine zibandakanya isicaphucaphu, ukugabha, intloko ebuhlungu, isisu esibuhlungu okanye iintlungu, ubuthathaka bemisipha, isiyezi, ukozela, kunye norhudo. Iziphumo ebezingalindelekanga zegalantamine hydrobromide zihlala zimnene kwaye zenzeka xa uqala ukuthatha eli yeza. Banokuphela ngokuhamba kwexesha, nangona kunjalo ukuba abayi kude badibane nogqirha wakho. Kukho ezinye ezingaqhelekanga kodwa iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho ezinjengokuphefumla, ubunzima besifuba, isisu esibuhlungu, ingxaki yokuchama, ukubamba, ukuphelelwa ngamandla phakathi kwabanye.
Yintoni i-Galantamine Hydrobromide?
IGalantamine hydrobromide sisiyobisi esisetyenziselwa ukunyanga okuphakathi okanye okuphakathi ngqondweni enxulunyaniswa nesifo i-Alzheimer's. Isifo i-Alzheimer sisifo sengqondo esihlala sitshabalalisa inkumbulo kunye namandla okucinga, ukufunda, unxibelelwano kunye nokukwazi ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla.
Amayeza e-galantamine hydrobromide asenokunyanga isifo esihambileyo se-Alzheimer kodwa anokusetyenziswa kunye nezinye iziyobisi ze-Alzheimer's.
Iyenzeka ngeendlela ezintathu eziphambili ezinamandla ahlukeneyo. Iifom ze-galantamine sisisombululo somlomo, iipilisi kunye neepilisi zokukhululwa ezandisiweyo.
（2） Kutheni isetyenziswa? Ngubani omele ukuthatha la mayeza?
IGalantamine hydrobromide isetyenziselwa ukunyanga iimpawu ezinesidima se-Alzheimer's. I-Galantamine hydrobromide ayiboniswanga kunyango lwesifo se-Alzheimer kuba ayichaphazeli inkqubo esisi sifo.
IGalantamine hydrobromide ibonakalisiwe ukuba isetyenziswe ngabantu abaneempawu ezinobulali ukuya kweziphakathi zesifo se-Alzheimer's.
（3） isebenza njani?
IGalantamine ikwiklasi yeziyobisi ezibizwa ngokuba yiacetylcholinesterase inhibitors.
IGalantamine isebenza ukonyusa inani le-enzyme, i-acetylcholine ngeendlela ezimbini. Kuqala isebenza njenge-acetylcholinesterase inhibitor eguqukayo kunye nokhuphiswano ke oko kuthintela ukonakala kwe-acetylcholine kwingqondo. Okwesibini, ikwakhuthaza ii-nicotinic receptors kwingqondo ukukhupha i-acetylcholine engaphezulu.
Oku kunyusa amaxabiso e-acetylcholine kwingqondo, enokunceda ukunciphisa iimpawu ezinxulumene nesifo sengqondo esixhalabisayo.
IGalantamine inokunceda ekuphuculeni amandla okucinga kunye nokubumba inkumbulo kunye nokucothisa ukuphulukana nokusebenza kwengqondo kwizigulana ezinesifo i-Alzheimer's.
Izibonelelo zeGalantamine Hydrobromide kwiAlzheimer'Isifo
Isifo sika-Alzheimer sibangela ukuba iiseli zengqondo ziyekelele kwaye ekugqibeleni zife. Oyena nobangela awaziwa kakuhle kodwa esi sifo siqhubela phambili sikhokelela kunciphiso lomsebenzi wokuqonda onje inkumbulo, ukufunda, ukucinga kunye nokukwazi ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla. Yintoni eyaziwayo malunga nezigulana zesifo sika-Alzheimer kwinqanaba eliphantsi le-acetylcholine yemichiza.
Ukusetyenziswa kweGalantamine ekunyangeni iimpawu zesifo sengqondo esihambelana nesifo se-Alzheimer kwenzeka ngenxa yendlela yayo yokwenza izinto ezimbini. yonyusa inqanaba le-acetylcholine, eyona nto ibalulekileyo ekuphuculeni ukuqonda. I-Galantamine isebenza njenge-acetylcholinesterase inhibitor eguqukayo kunye nokhuphiswano ke oko kuthintela ukonakala kwe-acetylcholine. Ikwakhuthaza ii-nicotinic receptors ukuba zikhuphe i-acetylcholine engaphezulu.
Ezinye iZibonelelo ezinokubakho
(1) Ifani eyi-Antioxidant
Uxinzelelo lwe-oxidative luyaziwa ngokuba ngunobangela wezifo ezininzi ezinokubangela ukonakala njengesifo sika-Parkinson, isifo sika-Alzheimer, isifo seswekile, phakathi kwabanye. Kwenzeka ngokwendalo kunye nobudala kodwa xa kukho ukungalingani phakathi kwee-radicals zasimahla kunye ne-antioxidants, ukonakala kwethishu kunokwenzeka.
IGalantamine yaziwa ngokutya iintlobo zeoksijini ezisebenzayo kwaye inika ukhuselo kwii-neurons ngokuthintela ukonakala kwe-neurons ngoxinzelelo lwe-oxidative. IGalantamine inokunciphisa ukuveliswa okungaphezulu kweentlobo zeoksijini ezisebenzayo ngokwandisa inqanaba le-acetylcholine.
IGalantamine ibonisa umsebenzi we-antibacterial.
Indlela ukuthatha la mayeza?
i. Ngaphambi kokuba uthathe i-Galantamine hydrobromide
Njengamanye amayeza kububulumko ukuthatha amanyathelo afanelekileyo ngaphambi kokuba uthathe i-galantamine hydrobromide.
Yazisa ugqirha wakho ukuba ngaba uyaliwa yi-galantamine okanye nayiphi na into engasebenziyo kuyo.
Chaza onke amayeza owasebenzisayo ngoku kubandakanya amayeza amiselweyo, amayeza angaphandle kwekhawuntareni, amayeza esintu okanye nayiphi na imveliso yempilo yendalo.
Kuyacetyiswa ukuba wazise ugqirha wakho ngezinye iimeko ophethwe kukubandakanya;
Utyando lwamva nje ngokukodwa esiswini okanye kwisinyi.
Umboneleli wakho wezempilo kufuneka axelelwe ukuba ukhulelwe okanye ucwangcise ukukhulelwa nokuba uyancancisa. Xa unokukhulelwa ngelixa uthatha isongezelelo segalantamine, kuya kufuneka uthethe nogqirha wakho kwakamsinya.
Kubalulekile ukuxelela ugqirha wakho ukuba uthatha i-galantamine ngaphambi kotyando kubandakanya utyando lwamazinyo.
Iziphumo zeGalantamine hydrobromide zibandakanya ukozela. Kuya kufuneka ke uphephe ukuqhuba kunye nokusebenza koomatshini.
Ukuthatha i-galantamine kunye notywala kunokunyusa i-galantamine hydrobromide ifuthe lokozela.
ii. Isisombululo sicetyiswa
(1) Isifo sengqondo esixhalabisayo esibangelwa yiAlzheimer'Isifo
IGalantamine hydrobromide yokunyanga isifo se-Alzheimer yenzeka ngendlela eqhelekileyo kunye namagama e-galantamine anjengeRazadyne eyayisaziwa ngokuba yiReminyl.
IGalantamine hydrobromide yenzeka ngeendlela ezintathu ezinamandla ahlukeneyo. Ithebhulethi yomlomo iyafumaneka kwi-4 mg, 8 mg kunye ne-12 mg yeepilisi. Isisombululo somlomo sithengiswa kuxinzelelo lwe-4mg / ml kwaye kwimeko ezininzi kwibhotile ye-100 ml. I-capsule yokukhululwa eyandisiweyo yomlomo iyafumaneka kwi 8 mg, 16 mg kunye neepilisi ezingama-24 mg.
Ngelixa zombini ithebhulethi yomlomo kunye nesisombululo somlomo zithathwa kabini yonke imihla iphilisi yomlomo eyandisiweyo ekhutshwa ithathwa kube kanye yonke imihla.
Ukuqala galantamine idosi Iifom eziqhelekileyo (ithebhulethi yomlomo kunye nesisombululo somlomo) zi-4 mg kabini imihla ngemihla. Ithamo kufuneka lithathwe kunye nesidlo sakusasa nakusihlwa.
Kwi-capsule ekhutshiweyo eyandisiweyo idosi yokuqala ecetyiswayo yi-8 mg mihla le ethathwa kunye nesidlo sakusasa. I-capsule ekhutshiweyo eyandisiweyo kufuneka ithathwe iphelele ukwenza ukukhutshwa kancinci kwamayeza imini yonke. Ke ngoko, musa ukutyumza okanye ukusika i-capsule.
Kwidosi yesondlo kuxhomekeke kunyamezelo lwakho kwi-galantamine kwifom yesiqhelo kufuneka ithathwe kwi-4 mg okanye i-6 mg kabini yonke imihla kunye nokunyuka kwe-4 mg rhoqo kwiiyure ezili-12 ubuncinci iiveki ezi-4.
I-capsule ekhutshiweyo eyandisiweyo kufuneka igcinwe kwi-16-24 mg yonke imihla kunye nokonyuka kwe-8 mg ngexesha leeveki ezi-4.
Ukuqwalaselwa okubalulekileyo xa uthatha i-galantamine
Soloko uthabatha i-galantamine kunye nokutya kwakho kunye namanzi amaninzi. Oku kuya kunceda ukuthintela iziphumo ebezingalindelekanga zegalantamine.
Kuyacetyiswa ukuba uthathe idosi ye-galantamine ecetyiswayo malunga nexesha elifanayo yonke imihla. Ukuba uphosa idosi, yithathe ngokukhawuleza ukuba uyakhumbula ukuba idosi elandelayo ayikufuphi. Ngaphandle koko weqa idosi kwaye uqhubeke neshedyuli yakho yesiqhelo. Nangona kunjalo, ukuba uyaliphosa idosi yakho kwiintsuku ezi-3 zilandelelana, tsalela ugqirha wakho anokukucebisa ukuba uqale ngaphezulu kwethamo lakho.
Ngokuxhomekeke kwinjongo ekujoliswe kuyo, ugqirha wakho unokuhlengahlengisa iidosi zakho ngokufanelekileyo ngokuzonyusa ubuncinci kwisithuba seeveki ezi-4. Sukuyihlengahlengisa idosi yakho yegalantamine.
Ukuba unikwe ipilisi ebanzi eyandisiweyo, qiniseka ukuba uyayiginya ngaphandle kokuyihlafuna okanye uyityumze. Kungenxa yokuba ithebhulethi ilungisiwe ukuze ikhuphe iyeza kancinci imini yonke.
Kwisisombululo somlomo sokumiselwa, soloko ulandela ingcebiso enikiweyo kwaye yongeza kuphela ichiza kwisiselo esingesiso esinxilisayo ekufuneka sithathwe kwangoko.
(2) Isisombululo sabadala (abaneminyaka eli-18 nangaphezulu)
I-capsule ekhutshiweyo eyandisiweyo inedosi yokuqala ye-8 mg ethathwa kanye yonke imihla kusasa. Umboneleli wakho wokhathalelo lwempilo unokuyihlengahlengisa idosi yakho ngokuyonyusa nge-8 mg yonke imihla emva kweeveki ezi-4 ubuncinci. Ukugcina ulondolozo kufuneka uthathe i-16-24 mg yonke imihla njengokucetyiswa ngugqirha.
Ukukhutshwa okukhawulezayo kweedosi, idosi yokuqala yi-4 mg ethathwa kabini yonke imihla kunye nokutya kungoko i-8 mg ngosuku. Idosi inokunyuswa ngugqirha wakho nge-4 mg yonke imihla emva kwexesha elincinci leeveki ezi-4.
(3) Isisombululo somntwana (iminyaka eyi-0-17 iminyaka)
Iziphumo zeGalantamine hydrobromide azifundwa ebantwaneni (iminyaka eyi-0-17 iminyaka), kufanelekile ukuba isetyenziswe kuphela kwiingcebiso zonyango.
iii. Kufuneka wenze ntoni xa uthatha libanda?
Ukuba wena okanye abaguli obajongileyo bathatha idosi ye-galantamine kakhulu, kuya kufuneka ubize ugqirha wakho okanye indawo yokulawula ityhefu kwangoko. Unokuya nakwiyunithi yongxamiseko ekufutshane msinyane.
Iimpawu eziqhelekileyo ezinxulunyaniswa ne-galantamine overdose sisicaphucaphu, ukubila, isisu esibuhlungu ekuphefumleni, izihlunu ezijijayo okanye ubuthathaka, ukuxhuzula, ukuphelelwa ngamandla, ukubetha kwentliziyo ngendlela engaqhelekanga kunye nobunzima xa uchama.
Ugqirha unokukunika iziyobisi ezinje ngeatropine ukubuyisa umva iziphumo ebezingalindelekanga zegalantamine ezinxulunyaniswa nokudlula ngaphezulu.
Ziziphi iziphumo ebezingalindelekanga ezinxulunyaniswa nokusebenzisa iHalantamine hydrobromide?
Ngelixa i-galantamine hydrobromide ibonelela ngezibonelelo zezempilo kubantu abanesifo se-Alzheimer, kusenokubakho iziphumo ebezingalindelekanga zegalantamine. Nazi Iziphumo ebezingalindelekanga zegalantamine oko kunokuba kodwa ayinguye wonke umntu onokuzifumana.
Iziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo ezinokuthi zibe nokusebenzisa i-galantamine zezi;
Ezi mpawu ziqhelekile xa uqala ukuthatha i-galantamine kodwa zihlala ziphakathi kwaye zinokuphela ngokusetyenziswa okuqhubekayo kweyeza. Nangona kunjalo, ukuba bayaqhubeka okanye baba nzima qiniseka ukubiza ugqirha wakho ufumane iingcebiso zobungcali.
Abanye abantu banokufumana iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu. Ezi ziphumo zibi aziqhelekanga kwaye kuya kufuneka ubize ugqirha wakho nje ukuba uziqaphele.
Iziphumo ebezingalindelekanga ezimbi zibandakanya:
Ukuphendula okungalunganga okunje kukukrala kolusu, ukurhawuzelela kwaye ngamanye amaxesha ukudumba kobuso, umqala okanye ulwimi.
Iimpawu zebhloko ye-atrioventricular kubandakanya ukubetha kwentliziyo, ukudinwa, isiyezi kunye nokufa isiqaqa
izilonda esiswini nokopha
Izibilini ezinamagazi okanye ezibonakala ngathi yindawo yekofu
Ukuqhubela phambili kweengxaki zemiphunga kubantu abane-asthma okanye ezinye izifo zemiphunga
isisu esibuhlungu / isisu esibuhlungu
ukutshisa okanye iintlungu ngexesha lokuchama
ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga zegalantamine ezichaziweyo zibandakanya;
ukuxhuzula / ukuxhuzula okanye ulunge
ibhloko ye-atrioventricular okanye ibhloko yentliziyo epheleleyo
ukunyusa i-enzyme yesibindi
ukugqithisa okubomvu okanye obomvu (erythema multiforme).
Olu luhlu uninzi alunazo zonke iziphumo ebezingalindelekanga zegalantamine. Kuyacetyiswa ke ukuba ubize ugqirha wakho ukuba ufumana naziphi na iziphumo ezingaqhelekanga ngelixa usela eli chiza.
Loluphi uhlobo lweziyobisi ezinxibelelana negalantamine hydrobromide?
Ukusebenzisana kweziyobisi kubhekisa kwindlela ezichaphazela ngayo ezinye iziyobisi abanye. Oku kunxibelelana kuchaphazela indlela ezisebenza ngayo ezinye iziyobisi kwaye zinokwenza ukuba zingasebenzi kakuhle okanye zikhawulezise ukwenzeka kweziphumo ebezingalindelekanga.
Kukho ezaziwayo Unxibelelwano lwe-galantamine hydrobromide nezinye iziyobisi. Ugqirha wakho unokuba sele elazi unxibelelwano oluthile lweziyobisi. Umboneleli wakho wezempilo uya kuba nakho ukutshintsha ezinye iidosi zakho ukunciphisa amathuba okuhlangana kweziyobisi okanye anokutshintsha amayeza ngokupheleleyo. Kunokuba luncedo kuwe ukufumana amayeza ngakumbi amayeza avela kumthombo ofanayo njengekhemesti yokudibanisa ngokufanelekileyo.
Gcina uluhlu lwamayeza owathathayo kwaye uxele olu lwazi kumboneleli wakho wezempilo ngaphambi kwalo naluphi na amayeza.
Olunye unxibelelwano lwe-galantamine hydrobromide;
Unxibelelwano kunye ne-anti-depressants
La machiza asetyenziselwa ukunyanga uxinzelelo kwaye anokuchaphazela indlela esebenza ngayo i-galantamine ukuyenza ingasebenzi. La machiza abandakanya i-amitriptyline, desipramine, nortriptyline kunye ne-doxepin.
Unxibelelwano kunye neziyobisi ezisetyenziselwa ukunyanga ukungabikho komzimba
Ezi ziyobisi zingachaphazela indlela esebenza ngayo i-galantamine.
La machiza abandakanya i-chlorpheniramine, i-hydroxyzine kunye ne-diphenhydramine.
Ukudibana namayeza esigulo eshukumayo
Ezi ziyobisi zichaphazela umsebenzi we-galantamine hydrobromide.
La mayeza aquka i-dimenhydrinate kunye ne-meclizine.
Iziyobisi zesifo sika-Alzheimer's
Amachiza asebenza ngokufanayo kwi-galantamine hydrobromide. Xa la machiza esetyenziswa kunye anokunyusa umngcipheko wokufumana iziphumo ezinokubakho zegalantamine. La mayeza aquka i-donepezil kunye ne-rivastigmine.
Nangona kunjalo, ezinye iziphumo ze-synergetic zinokufezekiswa ngokudityaniswa okuthile.
I-Galantamine kunye ne-memantine zisetyenziselwa ukunyanga isifo se-Alzheimer's. Ngelixa iGalantamine yi-acetylcholinesterase inhibitor memantine sisichasi se-NMDA esichasayo.
Xa uthatha i-galantamine kunye ne-memantine kunye, unokuqina okungcono kokuqonda kunokuba usebenzisa i-galantamine kuphela.
Nangona kunjalo, ezinye izifundo zangaphambili aziphumelelanga kuphuculo olubonakalayo ekusebenzeni kwengqondo xa i-galantamine kunye ne-memantine zisetyenziswa kunye.
Ukusebenzisana neziyobisi ngenxa yesinyi esingaphezulu
La mayeza anefuthe ekusebenzeni kwegalantamine. Ukuba benikhe nasebenzisana ninokungavuni kwi-galantamine. La machiza aquka i-darifenacin, i-tolterodine, i-oxybutynin kunye ne-trospium.
La machiza abandakanya i-dicyclomine, i-loperamide kunye ne-hyoscyamine. Banokuchaphazela ukusebenza kwe-galantamine.
IGalantamine kunye neziyobisi ze-autism
Xa i-galantamine kunye ne-autism iziyobisi ezinjenge risperidone zisetyenziswa kunye. Kuxelwe ukuba kuphuculwe ezinye zeempawu ze-autism ezinjengokucaphuka, ukonqena, kunye nokurhoxa ekuhlaleni
Singayifumana phi le mveliso?
IGalantamine hydrobromide inokufunyanwa kwikhemesti yakho yasekuhlaleni okanye kwiivenkile ezikwi-intanethi. Abathengi be galantamine uthenge ivela kusokhemesti ovunyiweyo onokunika amayeza. Ukuba ucinga ngegalantamine yithenge kwimibutho enesidima kwaye uyisebenzise kuphela njengoko kumiselwe ngumboneleli wakho wezempilo.
Galantamine sisiyobisi esifanelekileyo sokunyanga iimpawu zesifo sengqondo esixhalabisayo IAlzheimer isifo. Nangona kunjalo ayisilo nyango lwesi sifo kuba ayisiphelisi inkqubo yesifo se-Alzheimer.
Kuya kufuneka isetyenziswe njengecandelo kunyango lwesifo i-Alzheimer kunye nezinye iindlela. Sisongezo esigqwesileyo ngenxa yeendlela zayo ezimbini zokunyusa i-acetylcholine kwingqondo. Inika izibonelelo ezongezelelweyo kukhuseleko lwe-neural ngokuthintela uxinzelelo lwe-oxidative.
UWilcock GK. I-Lilienfeld S. Gaens E. Ukusebenza kunye nokukhuseleka kwe-galantamine kwizigulana ezinesifo se-Alzheimer's. 2000; 321: 1445-1449.
ILilienfeld, S., kunye neParys, W. (2000). IGalantamine: izibonelelo ezongezelelweyo kwizigulana ezinesifo i-Alzheimer's. Isifo sengqondo esixhalabisayo kunye nokuphazamiseka kwengqondo, 11 Suppl 1, 19–27. https://doi.org/10.1159/000051228.
UTsvetkova, D., Obreshkova, D., uZheleva-Dimitrova, D., kunye noSaso, L. (2013). Umsebenzi we-Antioxidant wegalantamine kunye nezinye ezivela kuyo. Ikhemesti yangoku yamayeza, 20(36), 4595–4608. https://doi.org/10.2174/09298673113209990148.
ILoy, C., kunye neSchneider, L. (2006). IGalantamine yesifo se-Alzheimer kunye nokuphazamiseka kwengqondo okuphakathi. Isiseko sedatha yeCochrane yokuphononongwa ngokuchanekileyo, (1), CD001747. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001747.pub3.
Isishwankathelo se-1 seGalantamine Hydrobromide
2. IGalantamine Hydrobromide
Isibonelelo se-3 seGalantamine Hydrobromide kwisifo se-Alzheimer's
4.Ezinye iZibonelelo ezinokubakho
5.Ulithatha njani olu nyango?
6.Zeziphi iziphumo ebezingalindelekanga ezinxulunyaniswa nokusebenzisa iGalantamine hydrobromide?
7.Zeziphi iintlobo zamachiza ezinxibelelana negalantamine hydrobromide?
8. Singayifumana phi le mveliso?